Itsva Martech Zone Logo ye2019 | Martech Zone
Imwe nzvimbo yandisina kuisa mari yekumaka yaive ino saiti. Panguva yangu boka yanga iine logo hombe yandinoda, uye isu tinoshanda nevatengi vedu vese pakuratidza kwavo, ini ndanga ndisina bandwidth yekushandira pa Martech Zone muchiso… kusvikira nhasi.
Chiratidzo chekare "M" chaive mufananidzo wakashandurwa zvishoma wandakatenga nekuchimbidza mushure mekunge ndachinja duraini. Yakanga iri pachena, isina kumiririra chero chinhu, uye yaindinetsa pese pandinoiona.
Mugadziri aishanda pa Highbridge logo yakaona kuti agency yedu yakashanda munzira dzakasarudzika uye dzehunyanzvi dzekuwedzera mhedzisiro kune vatengi vedu. Chiratidzo ndechekushambadzira kuruboshwe uye k kurudyi, asi nenzira dzakasarudzika dzinotsigira museve kumusoro.
Ini ndagara ndiri fan yebhuruu yeyangu logo zvakare, inotonhorera, inodzikamisa, uye inosimbisa. Saka, pane kutanga kubva pakutanga ne logo nyowani ye Martech Zone, Ndakabvarura ndokubatanidzazve Highbridge logo. Kufanana kwakakosha sezvo ini ndichida kumakisa iyo agency uye iyo blog zvakafanana.
Zvinogona kunge zvisiri pachena, asi logo inobatanidza m, t, uye z… kuratidza marteh zPoshi. Ini ndakave nekumwe kunakidzwa kunyora gumi nemimwe mienzaniso ndisati ndasvetukira mune illustrator uye ndichiivaka. Zvichiri zvishoma zvisingaenderane, saka ndinotenda inomiririra iyi blog.
Pamwe pamwe neiyo logo, ini ndakavhenekesa uye ndikagadzirisa iwo theme pa martech.zone naizvo. Kana iwe uri kuverenga nezve izvi mune yedu tsamba, ive shuwa kuti tinya nepakati uye utarise. Ini ndaderedza huwandu hwerugwaro, ndakagadzirisa musoro uye mafonti emuviri kuti zviverengeke kuverenga, uye kunyatsoisa mavara-mavara muzvikamu (ini ndinogona kuda kuzviita).
Imwe yezvinangwa zvangu gore rino ndeyekuteerera zvakanyanya kwauri uye kutanga hurukuro newe… kuchinjisa vateereri vangu kuita nharaunda. Saka, mhinduro inogamuchirwa uye inokurudzirwa! Ndizivisei zvaungade kudzidza zvakawanda nezvazvo uye kuti ndingaite sei kuvandudza saiti uye podcast.